तथ्यांकोवाच : दालमोठ, पापड र भुजिया उद्योगका सम्भावना
काठमाडौं (अस) । सानो पूँजी र साधारण प्रविधिमा उद्योग स्थापना गर्न सकिने दालमोठ, पापड, भुजिया जस्ता उत्पादनमा समेत मुुुलुक परनिर्भर छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करीब रू. ६३ करोड ८० लाखबराबरका यी वस्तुको आयात भएका छन् । विगत १० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर पनि ७ प्रतिशत छ । यसले नेपाली बजार यी उत्पादनका लागि आकर्षक रहेको प्रमाणित गर्छ ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महीनामा यी वस्तुको आयात रू. ६२ करोड पुगेको छ र यही प्रवृत्ति कायम रहेमा गत आर्थिक वर्षमा दालमोठ आयात करीब रू. ६७ करोड पुग्ने देखिन्छ । स्वदेशमा सहज रूपमा कच्चापदार्थ उपलब्ध हुने र कामदारलाई साधारण तालीम दिए पुग्ने भएकाले यस उद्योगको विकासमा सरकार र निजीक्षेत्र लाग्ने हो भने छोटो समयमा नै दालमोठ, पापड र भुजियामा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।
यसका लागि निजीक्षेत्रले विशेषतः बाह्य बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय उत्पादन गर्नुपर्छ भने सरकारले पनि यस उद्योगलाई अनुदान, प्रोत्साहन र संरक्षण प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । त्यस्तै, आयातीत उत्पादनसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न यस उद्योगलाई करमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पनि आवश्यक छ ।